10 Ezona ndawo zokuntywila ziLungileyo kwiLizwe | Gcina A Isitimela
ekhaya > Ukuhamba eIceland > 10 Ezona ndawo zokuntywila ziLungileyo kwiLizwe
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 16/07/2021)
Kwiinzonzobila zolwandle, efihliweyo kude kwimpucuko, kwaye ingachazwanga lixesha, la 10 ezona ndawo zokuntywila emhlabeni. Ukusuka kwiingqaqa zekorale ezinemibala eqaqambileyo ukuya kwiinqanawa zeWWII, ubomi baselwandle, kunye nemingxunya eblue, Lungiselela izixhobo zakho zokuntywila kuba le seshoni yokuntywila imalunga neyona nto inomdla okwangoku.
1. Eyona ndawo yokuntywila eChina: Udonga Olukhulu
10 Abakhenkethi abazizigidi baya kuDonga oluKhulu lwase China minyaka le, kodwa bambalwa kakhulu abazi ukuba banokuntywila kwenye yezona ndawo zibalaseleyo ehlabathini. Ngelixa uninzi lwabantu luhamba ngodonga lwe-21o00 km, Ukuthatha imifanekiso kwimidiya yoluntu, IPanjiakou Reservoir yindawo yokuntywila emanzini. I-Great Wall yase China kuphela koMmangaliso wehlabathi, ungangena ngaphakathi.
Isenokungathandeki kwaye intle njengokuntywila eIndonesia okanye eFiji, kodwa uya kubuyiselwa umva ngokujonga kuDonga Olukhulu lwase China. Ayisiyiyo nje ukuthanda indawo esingqongileyo, kodwa ukuyifumana kwasekuqaleni, ukusuka kwizitena ukuya phezulu, isakhiwo simi ngxi amawaka eminyaka, Ukusinda kwiingozi zendalo, ubukhosi, notshintsho kwezopolitiko.
Elona xesha lilungileyo lokuntywila:
Ukuntywila kuDonga oluKhulu e-China ngamava acelomngeni nkqu nakubantu abahlukeneyo abaphambili. Isizathu bubushushu obuphantsi, ukufikelela ubuninzi be 10 ukuya kwi-11 ° C, e 7 Ubunzulu beemitha ehlotyeni. ngoko ke, Elona xesha lilungileyo lokuntywila kuDonga oluKhulu kuxa kuphela xa uzilungiselele kakuhle. Imfuno eyongezelelweyo yile ubuncinci obugqityiweyo be 100 ukuba 200 ukuntywila kwiindawo ezahlukeneyo zokuzonwabisa.
2. Eyona ndawo yokuntywila e-UK: Wales
Ngemiqolomba, 500 Ukwaphuka, nobomi baselwandle obumangalisayo, Unxweme lwewales yindawo emangalisayo yokuntywila. Apha ungatshona ngaphezulu kwe-50m emanzini eSkomer, kunye neSkokholm, kunye neziqithi zase Middleholm. Ukubonakala yenye yezona zinto zibalaseleyo kuloo ndawo, ukuvumela ukuba uncome ubomi obuhle baselwandle kwaye ufumane i-WWII yrecks ukuba ukwimbali.
Ngaphandle kwembono yokulala inayo, I-Wales ngenene yindawo entle yokuntywila eYurophu. Umzekelo, ISkomer Marine Reserve ePembrokeshire yenye yezona ndawo zokuntywila eWales: intlanzi yekati, amahlengethwa, ii-slugs zolwandle kunye nolwandle, zimbalwa kuphela izidalwa zolwandle oza kudibana nazo.
3. Indawo egqibeleleyo yokuntywila e-Itali: Portofino
nge 20 iindawo ezahlukeneyo zokuntywila, Portofino ingaphezulu kwe- idolophu enomtsalane yonxweme eYurophu. Ukongeza kwiidolophu ezinomtsalane, zokudlela, namanxweme, Unxweme lwaseLigurian yindawo entle yokuntywila eYurophu.
Okokuqala, IPortofino Marine Reserve inikezela ngeengqaqa ezimangalisayo kunye nokonakala kwabasaqalayo nabahambi phambili. Okwesibini, umfanekiso oqingqiweyo kaKristu, UKristu wenzonzobila yenye yezona ziphezulu 5 Iindawo zokuntywila ePortofino. Last, kodwa okunga kuncinananga, i-MOHAWK yenyamakazi eyonakalisayo yenye yomtsalane wokuntywila 20-40 mitha.
Ukushwankathela, Iindawo zokuntywila ePortofino zikulungele ukuntywila kwindawo yokuqala, kunye nokufumanisa enye emangalisa ukumangaliswa kwendalo ukuba ungumntu onamava.
EMilan ukuya ePortofino ngololiwe
IVenice ukuya ePortofino ngoLoliwe
UFlorence To Portofino Ngololiwe
I-Turin ukuya ePortofino ngololiwe
4. Indawo egqibeleleyo yokuntywila eFrance: Iziqithi zaseFrance zaseGuadeloupe
Kwiparadesi yaseCaribbean, Iziqithi zase la Guadaloupe sisiqwenga samazulu sokuntywila. Eli qela lincinci leziqithi liquka iLa Grande Terre, kunye noPetite Terre, ekhaya kwintaba-mlilo, ihlathi lemvula, ubuhle bendawo kunye namanxweme, kwaye okona kubaluleke kakhulu yenye yezona ndawo zokuntywila zibhetele eYurophu.
Iziqithi zaseGuadeloupe azithandwa njengeBali okanye iBelize, kodwa ubomi baselwandle apha ngokuqinisekileyo buya kukugcina emanzini iholide yakho iphela. ICousteau Marine Reserve yeyona ndawo yokuntywila ebalaseleyo eGuadeloupe, ngezilwanyana ezimangalisayo kunye neentyatyambo, imigudu, emiqolombeni, kunye neendawo ezininzi ezifihliweyo zokuntywila, kunye nexesha lokuqala elifuna ukonwabela ubomi baselwandle kumanzi aseCaribbean.
Elona xesha lililo lokuntywila kwiiGuadeloupe Islands:
Ubushushu bamanzi buhlala buyi-23-28 ° C unyaka wonke eGuadeloupe, ke unokuza ngokuntywila nanini na ufuna.
5. Iziqithi zeOrkney, Scotland
Ngaphezulu kwamadlelo aluhlaza, iinduli, neentaba, Iziqithi zeOrkney zinembali yolwandle esemagqabini emhlabeni. zemibhalo, nazi 7 iinqanawa emazantsi e-Orkney emanzini eScotland. Ezi ziphazamiso ezivela kwiiLwandle eziPhakamileyo zaseJamani kwi-Scapa Flow, ngo 1919.
Ukongeza kwiinqanawa, kukho izilwanyana zaselwandle ezimangalisayo zokuhlola emanzini acocekileyo. Njengokuba, amanzi eIzithintelo zeChurchill kunye ne-Yesnaby okanye iInganess zilungele ukubona ubomi baselwandle.
Elona xesha lililo lokuntywila kwiiIqithi zeOrkney:
IPasika ukuya kuNovemba, xa ubushushu buli-13 ° C.
6. Iindawo ezigqibeleleyo zokuntywila eYurophu: Silfra, Ayisilend
Phakathi kwamazwekazi amabini, entliziyweni ye Ipaki yeSizwe iThingvellir, Amanzi acacileyo e-Iceland alindele amava amangalisayo okuntywila. Iimpawu ezizodwa zejoloji eSilfra zibonelela ngeetonela eziyimfihlakalo kunye nemiqolomba yabantu abahlukeneyo abanamava.
Eyona nto inomdla ngokudilika eSilfra kukuqhekeka. Le ndlela yokuntywila yenziwe ngonyaka 2 Ukuhamba kwe-cm ye-North American kunye ne-Eurasia yeetetonic plate. Oku kwenziwa okokuqala emva kwenyikima, kodwa ikhuselekile ngokupheleleyo ngokuntywila kwezi ntsuku, ke ungaqala ukulungiselela amava okudada angenakulibaleka kumanzi e-Iceland.
Obona bunzulu bokuntywila buvunyelwe eSilfra 18 mitha.
7. Ezona ndawo zokuntywila ziLungileyo kwiLizwe: Bali
Amanxweme angqonge isanti, iitempile, iintaba zentaba-mlilo, Amanzi e-Bali omlingo ngumangaliso wehlabathi ngokwawo. Ngaphandle kwamathandabuzo, IBali yindawo entle yeholide kwaye ilungele ukuntywila.
KwiBali, unokwahlula ixesha lakho phakathi kweendawo ezininzi zokuntywila kuba zikuyo yonke indawo. Ukusuka kwiingqaqa zekorale ezimibalabala ukuya kwiintlanzi ezinkulu, kunye nemiqolomba yemifanekiso eqingqiweyo kaBuddha, I-Bali engaphantsi kwamanzi lihlabathi elinomdla nelomtsalane lokuntywila kunye snorkeling.
Elona xesha lilungileyo lokuntywila eBali:
Ngomhla ka-Meyi ukuya ku-Novemba lixesha lokuntywila eBali, kwaye elona xesha lilungileyo lokubona iManta Rays ngo-Epreli ukuya kuMeyi.
8. Ezona ndawo zokuntywila ziLungileyo kwiLizwe: IBlue Hole eBelize
125 ubunzulu, isetyhula imilo, kunye nembonakalo entle yomoya, Indawo yokuntywila eBlue Hole eBelize, yenye phezulu 10 kufuneka nditsibe umhlaba. Lo mngxunya mkhulu ulapho kanye kwiLightouse Reef eBelize, kunye nokubonakala okuhle, usenokuzifumana ukwi-diving adventure engalibalekiyo.
Ngokungafaniyo nezinye iisayithi zokuntywila ezilungileyo kuluhlu lwethu, iBlue Hole ayikhayeni kwimifanekiso eqingqiweyo yaseBalinese, ubomi obunqabileyo bolwandle, okanye iingqaqa ezimibalabala. Into oyifumanayo ingumceli mngeni kwaye iyanelisa yokuntywila, oko kuya kukusa kwinqanaba elilandelayo le-divemaster.
Elona xesha lilungileyo lokuntywila kwiBlue Hole:
Ngo-Epreli ukuya kuJuni zezona zilungileyo ekubukeleni ii-whale shark kunye nokudilika.
9. URaja Ampat |: Ukuntywila Ekupheleni Kwehlabathi
Igcinwe kude kwimpucuko kude kube 2004, URaja Ampat yiparadesi efihliweyo, iphakathi kwe-Indonesia ne-Australia. Enkosi ngoku kufunyanwa mva, Izilwanyana zaselwandle zaselwandle eRaja Ampat yenye yezona zinqabileyo emhlabeni.
Xa ungene kwiRaja Ampat, uya kufumanisa ngaphezulu 600 iintlobo zeekorali ezilukhuni zizodwa, ukongeza kubomi obunemibala kunye nangaphandle kweli hlabathi lolwandle. Eli hlabathi lahlukileyo likumbindi we 4 iziqithi eziphambili: Waigei, Batanta, Salawati, kunye neMisool kwiindawo ezikude zaseNtshona Papua.
Ukuba uphakathi kwi-diver ehamba phambili, emva koko kuya kufuneka ubhukishe ikhefu lakho lokuntywila elilandelayo eRaja Ampat.
Elona xesha lilungileyo lokuntywila eRaje Ampat:
Ngo-Novemba ukuya ku-Epreli ngamaqondo obushushu aqala nge 27 ukuba 30 ° C.
10. Iindawo ezigqibeleleyo zokuntywila eTshayina: IShi Cheng Isixeko Samandulo KwiLake yeQiandao
Nzulu kwiLake Islands yeLake, kwiphondo laseZhejiang, i isixeko samandulo kaShi Cheng uxoka. Kubunzulu be 40 mitha, uya kufumanisa imimangaliso yesixeko esilahlekileyo saseTshayina. Ngaphandle kwamanzi aqatha kunye nexesha elidlulileyo, iimpawu zokwakha zesixeko, kwaye neenkcukacha zomthi zigcinwe kakuhle.
Ngezi zizathu, Isixeko saseShi Cheng yiparadesi efihliweyo yabantu abahlukeneyo. Uninzi luza kufumana ubuhle beLake Qiandao, kodwa esi sixeko silahlekileyo sesinye sezizathu zokuhamba. Isixeko nentlambo zazizele ngamanzi 1959, kodwa ikhuselekile ngokupheleleyo ekuntywila.
Elona xesha lilungileyo lokuntywila eShi Cheng:
Ukuwa, enkosi kwimozulu eyomileyo nefudumeleyo.
Apha Gcina A Isitimela, Siya kukuvuyela ukukunceda ucwangcise uhambo olungalibalekiyo 10 iziza zokuntywila ezilungileyo emhlabeni ngololiwe.
Ngaba uyafuna ukufaka iposti yethu yebhlog "1o Iindawo eziDiving eziBalaseleyo eMhlabeni" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fxh%2Fbest-diving-sites-world%2F- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, kwaye ungatshintsha / ru ukuya / fr okanye / es nakwiilwimi ezininzi.
EnElEsiYen zekenya nguyennguyen ukuntywila ukuntywila Iindawo zeDiving Ukuntywila kwindawo yokuphumla MarineWildLife Ukudayiva emanzini ULwandleLife